Amazon Prime သည်တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၃၆ အထိဈေးနှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းများဖြင့်တက်လာသည် Gadget သတင်း
Amazon Prime သည်စျေးနှုန်းတက်ပြီးတစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၃၆ အထိအထိရှိသည်
Jose Rubio | | အမေဇုံ, ယေဘုယျ, NOTICIAS
၎င်းသည်ပွင့်လင်းသောလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အချိန်ကာလတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပုံရသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်လအနည်းငယ်ကြာပြေးခဲ့သည့်ကောလာဟလများကိုအတည်ပြုခဲ့သည် နှစ်စဉ်အမေဇုံချုပ်အခကြေးငွေအမြန်ဆုံးနှင့်အခမဲ့ဖြစ်ပြီး၊ ယခုအချိန်အထိတစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၁၉.၉၅ ကုန်ကျသည်။ ဒီကနေတိုးလာလိမ့်မယ် သြဂုတ်လ 31 မှ တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၁၁၉.၈၉။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် ၀ ယ်ယူထားသည့်ဖောက်သည်အများစုသည်အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိသည် အမေဇုံကဒီစျေးနှုန်းတိုးမြှင့်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးခဲ့သည်.
သို့သော်သတိထားပါ၊ အကြောင်းမှာအခကြေးငွေအသစ်ကြောင့်ဖြစ်သည် ဖောက်သည်အသစ်များအတွက်သာမကလက်ရှိသုံးစွဲသူများအတွက်ပါအသုံးချလိမ့်မည်။ မြင့်တက်ခဲ့သည် ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ နှင့်ဆက်သွယ်ရေး၏ထိုအချိန်ကထိရောက်သောရက်စွဲနှင့်အတူ။ သင်ဖောက်သည်တစ် ဦး မဟုတ်ပါက Amazon Prime မှဖြစ်ပြီး၊ သင်စာရင်းသွင်းလိုသည်။ တင်ချက်ချက်ချင်းလျှောက်ထားပါလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် သင်ပြီးသား subscription ကိုရှိပါက တက်ကြွစွာ, ၎င်းသည်၎င်း၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှုအပေါ်မူတည်သည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းနှုန်းထားသစ်ကိုသင့်ထံလျှောက်ထားသည်။
Amazon Prime ဖောက်သည်အသစ်များအတွက် ဒီကနေ့ကနေစရိတ်ကျသင့်ပါလိမ့်မယ် တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၁၁၉.၈၉.
လက်ရှိ Amazon Prime ဖောက်သည်များအတွက် သင်သည်သင်၏ခွဲတမ်းသက်တမ်းတိုးရန်ရှိပါက အောက်တိုဘာ2မတိုင်မီသူတို့ကမင်းကိုအားသွင်းလိမ့်မယ် 19,95 ယူရိုs ကို, နှင့်အဆင့်မြှင့် 2019 သက်တမ်းတိုးအတွက်လျှောက်ထားပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ subscription သက်တမ်းကုန်သွားရင် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်မှနှုန်းထားသစ်ကို အသုံးပြု၍ သက်တမ်းတိုးပါလိမ့်မည် တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၃၅၀.
လက်ရှိ Amazon Prime အခမဲ့လတွင်သုံးစွဲသူများအတွက် - အကယ်၍ အခမဲ့လပြီးနောက်သင်စာရင်းသွင်းလိုလျှင်၊ သူတို့က 19,95 ယူရိုကိုလေးစားပါလိမ့်မယ်သူတို့သက်တမ်းတိုးလိုလျှင် 2019 ကနေမြင့်တက်လျှောက်ထား
La ယခင်ယူရို ၁၉.၉၅ စျေးနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၈၀% တိုးခဲ့သည် လူအများအပြားအတွက်အရှုပ်တော်ပုံဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်မကြာမီကထွက်ပေါ်လာသောကောလာဟလများကြောင့်၎င်းသည်မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်သည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ အချို့လူများအနေဖြင့်တစ်နှစ်လျှင်တင်ပို့မှု ၇-၈ ခန့်တင်ပို့ရောင်းချခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည် ယူရို ၃၆ ကိုတစ်ပြိုင်တည်းပေးချေရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုသာ ရယူ၍ Prime Video၊ Prime Music သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံအကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအားသာချက်များကိုချန်လှပ်ထားနိုင်သည်။ အဲဒါကြောင့်ပဲ လစဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကိုလည်းကမ်းလှမ်းသည်တစ် ဦး ငွေပမာဏသည် € 4,99 တစ်လလျှင်, အရာကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားပါတယ် နှစ်စဉ်အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်တစိတ်တပိုင်းပေးချေမှုအားဖြင့်တူညီသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်မ ၀ ယ်သောသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်းအခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းမှအကျိုးရယူလိုသည်။
နေဆဲစပိန်အတွက်စျေးနှုန်းမြင့်တက်နေသော်လည်း မိသားစုအစီအစဉ်များမရှိပါ ကြေးပေးသွင်းမှုနှင့်အတူခွင့်ပြုသည့်အခြားဥရောပစျေးကွက်များတွင်လက်ရှိ မိသားစုတစ်စု၏အသုံးပြုသူများကို ၀ ယ်နိုင်သည်, ဥပမာ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စျေးနှုန်းတက်ခြင်းနှင့်ပင် Amazon ၌တစ်နှစ်လျှင်အကြိမ်များစွာ ၀ ယ်ပါက Prime သို့တစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၃၆ ပေးသွင်းရကျိုးနပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » Amazon Prime သည်စျေးနှုန်းတက်ပြီးတစ်နှစ်လျှင်ယူရို ၃၆ အထိအထိရှိသည်